आज बिहानैदेखि पानी दर्किरहेको थियो । ऊ हतार हतार गर्दै थियो । भर्खर घाँस काटेर आएको । भिजेका कपडा खोल्यो , नुहाइधुवाई ग¥यो । घडीले पौनै दश हानीसकेछ । “छिटो जानुप¥यो, स्कुल आज पनि अबेला हुने भयो ।” मनमनै सोच्दै उसले दुई गाँस छिटोछिटो टिप्यो । खक्ल्याक खुक्लुक चुठ्दै लोटा बाहिरै राख्यो , झोला टिप्यो । त्यसमा कापी कलम के थियो, थिएन हेर्न भ्याएन । पाइन्ट माथि सा¥यो , छाता ओढ्यो र दौडियो स्कुल तिर…….।
“मेरा बाबै आज पनि ढिला भइएछ , अमित सर आज पनि ठूलो लठ्ठी लिएर गेटमै कुरेर बस्नुभएको रहेछ , के गर्ने होला ?”
“ किन ढिलो ? सवा दश बजिसक्यो , यति बेला हो विद्यालय आउने ?…..किन सधैं यसो गर्छस् ?…. हिजो पनि…”
“अझ बढी बोल्छस ? त्यसै त ढिलो आउँछ अझ बहाना बहाना बनाउँछ ।” अमित सरको गर्जन संगै ऊ बोल्न सकेन । “अब १०० पटक उठबस गर् ।” उसलाई भनिए जस्तै खुरुखुरु ग¥यो । “ ल अब भोलि देखि आउँछस् ?” …. माफ गर्नुस सर भोलिदेखि आउँछु सर समयमै … पक्का आउँछस ? हो सर, फरक पर्दैन ।
“ल जा त्यसोभए । फेरी यसो भयो भने घर फर्काइदिन्छु ।”
भोलि विहान ऊ सबेरै उठ्यो । उसलाई होमवर्क गर्ने फुर्सद भएन । हँसिया नाम्लो टिप्यो , खरबारीतिर दौडीयो । घाँस काटेर फर्किदा बाटोमा पल्ला घरको सुमन भर्खर उठेर मुख धुन थालेको उसले देख्यो । सिम्रन चिया पिउँदै थिई । उसले चियातिर मन डुलाएन, नास्ता पनि कुरेन । कापी कलम लियो , ‘होेमवर्क’ गर्न बस्यो । छिटोछिटो गरी सिध्यायो । सधै टि.भि. मा यसो समाचार हेथ्र्यो आज हेर्न थालेन । खाना तयार थियो । खाएर डे«स लगायो । सरासर स्कुल तिर हिड्यो । जादाजाँदै हातमा बाँधेको घडी हे¥यो । “साढे नौ, ए आज त सबै भन्दा छिटोपुग्छु ” मनमनै भन्यो ।
विद्यालयमा सुनसान थियो । एकै छिनपछि मात्र अरु एक –दुई जना साथीहरु आउन थाले । ऊ मख्ख थियो आज अमित सरको गाली खानु पर्दैन । अनुप सरको म्याथको होमवर्क पनि गरी सिध्याएको छु । कति बेला कक्षाकोठा खुल्ला र गएर पढ्न पाइएला आज ऊ अलि बढी नै उत्साहित भयो ।
“सुन्दर !” उसको साथी राम चिच्याउदै ऊ भएतिरै आयो । “सु्न्यौ , आज नेपाल बन्द रे ! विद्यालयमा विदा रे ! सबै जना बाटो बाटै फर्किसके , जाऔं हामी पनि घरतिर ।”
उसले गेटतिर हे¥यो । अमित सरले सधैं गेटमा लिएर बस्ने लौरो त्यही कुनामा ठडिएको थियो .. तर अमित सर त्यहाँ थिएनन् । उसले विस्तारै घरतिर पाइला बढायो …. हिजो उठबस गर्दा थाकेका उसका गोडा अझै दुखिरहेका थिए ।